के महामारीमा होटलमा बस्नु सुरक्षित हुन्छ ? – bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > के महामारीमा होटलमा बस्नु सुरक्षित हुन्छ ?
२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, न्यूयोर्क। कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला होटलमा बस्नु सुरक्षित होला की नहोला ? अहिले धेरै मानिसलाई यो प्रश्नले सताइ रहेको पाइन्छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्रले यस बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्दै स्पष्ट पारेको छ । उसका अनुसार कोरोनासँग सुरक्षित रहनका लागि होटलमा बस्नु भन्दा घरमा बस्नु नै सुरक्षित हुनेछ ।
अन्तराष्ट्रीय बिचार दृष्टिकोण
२८ चैत्र २०७७, शनिबार २१:३२ bampijhyala 0
नारी सीमा भित्र सीमा बाहिर !
कल्पना श्रेष्ठ महर्जनसमय गतिशील छ । मान्छेको अतृप्त चाहना...
कानुन परिमार्जन गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन मन्त्री नेवाङ्गको प्रतिबद्धता २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१७
काँग्रेसको प्रस्ताव प्रष्ट छैन : महन्थ ठाकुर २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१७
३०३ जना सङ्क्रमित थपिए, उपत्यकाका १५४ जनामा पुष्टि २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१७
पिक्सेल ५ ए ५ जी स्मार्टफोन रद्द भएको भन्ने हल्लाको गुगलद्वारा खण्डन २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१७
खोपको प्रभावकारिता कम भएको चिनियाँ अधिकारीको स्वीकारोक्ति २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:१७